WAR CUSUB+DAAWO: Ciidamo badan oo wali kusugan bartamaha magaalada, Ganacsiga oo xiran iyo M/weynaha cusub ee DDSI oo hadlay. – Puntlandtimes
WAR CUSUB+DAAWO: Ciidamo badan oo wali kusugan bartamaha magaalada, Ganacsiga oo xiran iyo M/weynaha cusub ee DDSI oo hadlay.
August 8, 2018 W LAASCAANO
JIGJIGA(P-TIMES)- Xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta Ismaamul gobaleedka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa degan subaxnimada hore ee saaka, waxaana wali aan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ay sameynayaan shacabka yar ee kusugan gudaha magaalada, Kumanaan qof ayaa ka baxay guryahoodii cabsi ka qabaan dagaal ka dhaca gudaha magaalada.
In ka badan 10,000 oo kamid ah ciidamada Milateriga Itoobiya ayaa la keenay magaalada gudaheeda, waxayna ciidamadaas ahaayeen kuwa geystay ilaa doraad in ka badan 100 qof dilkooda, sidda ay xaqiijinayaan wararka laga helayo dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
RIIX HALKAAN SI AAD U DAAWATO XAALADDII U DAMBEYSAY
Xogaha la helayo ayaa sheegaya in Madaxweynaha cusub ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Axmed Cabdi Maxamuud uu si rasmi ah saaka u tagi doono bartamaha magaalada, si ula hadlo dadka uguna muujiyo in ganacsiga la furo, Odayaasha iyo culumada deegaankuba waxay balan-qaadeen in nabadda laga shaqeeyo oo wax kasta taas laga hormariyo.